Projects | KSID
စီးပွားရေး နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ အနေအထားများ
ကချင်ပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၏ စီးပွားရေးအခြေအနေကို လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက အရေးအပါဆုံးမှာ ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး နှင့် စက်မှု၊ လက်မှုလုပ်ငန်းများမှာ ဒုတိယ နှင့် တတိယနေရာတွင် ရှိသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေး နှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမြောက်အနေအထားများကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါသည်။ လက်ရှိအခြေခံစီးပွားရေး တောင့်တင်းမှုအပေါ်မူတည်၍ စီးပွားရေးစီမံကိန်းများကို ထပ်မံအကောင်အထည် ဖော်ခြင်းဖြင့် ကျန်စီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုလည်း မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို တိုးမြင့်၍ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ စီးပွားရေးကွန်ယက်ကို ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်း။
ခရီးသွားများ အစဉ်အမြဲ ဝင်ရောက် ထွက်ခွာနေသောဒေသဖြစ်သဖြင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း။
ဒေသအတွင်း အခြေခံ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း၍ စီးပွားရေး အခြေအနေများ ကို မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း။
ပြည်နယ်အတွင်းရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့များကို အခြေခံပြီး လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကို အများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့်အတူ ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်သွားကြမည်။
ØKachin State TV Channel
အိမ်နီးချင်း တရုတ်မှယူနန်ပြည်နယ် ၊ အိန္ဒိယမှအာသံပြည်နယ် တိုသည် ကမ္ဘာလူဦးရေ အများဆုံးနှင့် စီးပွားအင်းအားအကြီးဆုံးဆိုသော အချက်များကို လေ့လာဆန်းးစစ်ပြီး ပြည်နယ်တွင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများကို ပြည်နယ်အစိုးရ နှင့် အတူ ပူပေါင်းဆောင် ရွက်သွားကြမည်။
Øတရုတ် – အိန္ဒိယကုန်စည်ဖလှယ်ရေးဇုန်
Exterior designing is the process of designing the exterior appearance ofahome. When you approachaparticular home, its external appearance is the first thing that comes to your notice. The look and feel of the exterior ofahome can haveawelcoming effect in your mind
Furniture design isaspecialized field where function and fashion collide. Many interior designers believe that furniture is one of the most important aspects of an interior space